DEG-DEG: Baarlamanka Soomaaliya oo codka kalsoonida siiyay Golaha Wasiiradda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG-DEG: Baarlamanka Soomaaliya oo codka kalsoonida siiyay Golaha Wasiiradda
MAREEG 9 February 2015 9 February 2015
Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan uu ku yeeshay Muqdisho cod aqlabiyad leh ku ogolaaday xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmarke.
Kulanka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” waxaa soo xaadirtay 213 Xildhdibaan iyadoo kulanka oo goob joog ka ahaa Ra’isul wasaaraha Soomaaliya isla markaana uu khudbad ka jeediyay isagoo ka codsaday Xildhibaanada in xukuumadda la siiyo codka kalsoonida.
Waxaa xukuumadda ogolaatay 191 xildhibaan waxaana diiday 22 Mudane, waxaana Guddoomiyaha Maxkamadda sare Soomaaliya Abuukaate Caydiid Cabdullaahi Ilko Xanaf uu dhaariyay Wasiirada cusub ee Xukuumadda Soomaaliya.
Kulanka baarlamanka oo furmay iyo RW Cumar & qaar ka mid wasiirda oo goobjoog ah
Taliyaha Nabadsugidda oo tegay Dhuusa Mareeb una gogol xaaraya booqashada madaxweyne Xasan